Warshadda Qalinleyda Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Hirgelinta qorista ama sawiridda. Dhammaan agabyada loo adeegsado qalin-qori qurux badan, qalin-qori, qalin-kaarboon iyo xirmo qalin oo kala duwan ayaa u fiican deegaanka, ammaan u ah carruurta & waxay la kulmi karaan heerar imtixaan oo kala duwan.
Qalinku waa aalad gacanta lagu qoro ama wax lagu sawiro, badanaana waa warqad. Inta badan ulaha qalinku waxay ka samaysan yihiin budada garaafka oo lagu qaso xayndaab dhoobo ah oo ay fududahay in la masaxo. Qalinleyda qalin-qori ee ugu caansan waa alwaax khafiif ah, badiyaa wareegsan, laba geeslehna ku leh isgoysyada, laakiin mararka qaarkood cylindrical ama saddex-geesood ah. Qasnadda dibedda waxaa laga samayn karaa qalab kale, sida caag, qulqulaya ama warqad. Si aad u isticmaasho qalinka, waa in sanduuqa la xardho ama la diiriyaa si loo muujiyo dhammaadka shaqada ee xudunta oo ah meel fiiqan oo ay dadku isku muujiyaan.
Qalin waa aalad gacanta ku fudud oo cajiib ah oo buuxinaysa baahiyaha xafiiskaaga oo wax ku baranaya iyadoo ay ugu wacan tahay khadadka mugdiga ah ee siman. Qalin HBwaa halbeegga qorista maalinlaha ah. Waxa kale oo aad samayn kartaa darajooyin kala duwan oo leedhka ah baahiyo kala duwan oo aad ku dhisi kartaa ama u dalban kartaa qalinkaaga ku habboon midabbo kala duwan oo ay ku jiraan hal xariiq oo qoraal ah iyo far waaweyn. Ka sokow adeegsiga qalinka qalinka, waxaad ku dhejin kartaa astaantaada kor u qaadista ama xayeysiinta astaantaada qiimo jaban, fadlan naso hubso in garaafka haraaga ah ee ka soo baxay qalin qalin uusan ahayn mid sun ah, garaafkuna waxyeello ma leh haddii la cuno, dadku si miyir leh ama miyir beel u hayn doonaan maskaxda ku haysa markaad isticmaaleyso, sidaa darteed sida iska cad tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah sheyga dhiirrigelinta ugu wanaagsan xulashada.
Waxaa laga sameeyay basswood, buuxinta garaafka. Buraashyada jilicsan ayaa aad u adkaysi u leh oo si sahlan loo nadiifin karaa.
Darajooyinka rasaasta: Waxaa lagu taxay kuwa ugu jilicsan ilaa kuwa ugu adag: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, iyo 9H.
Dhammaadka Satin-siman ee qabashada aaminka ah, raaxada leh
Xulashada alaabta: qalinka garaafyada，Qalinleyda garaafyada adag，Qalinka garaafyada dareeraha ah，Qalinka dhuxusha，Qalinka Kaarboon，Qalin midabaysan，Qalin qalin，Qalinka midab -biyoodka
Xulashada qaabka: Saddex geesood, Hexagonal ， Round, Bendable
Aad ugu habboon hadiyadaha xayaysiinta, hadiyadaha, hadiyadaha dhalashada, iwm. U fiican dugsiyada, guryaha, iyo xafiiska.
Hore: Silikoon Kuwo kale
qalimaan laga sameeyay caado
Calaamadaha Aqoonsiga Xayawaanka
Lanyards -ka Logo -xidhka / Xirmooyinka Lanyards -ka ah